Otu esi eji nyocha nke Telegram | Gam akporosis
Telegram dị ka WhatsApp na nso nso a ka etinyela nyocha dị elu nke iji chọta nsonaazụ ziri ezi. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọ ihe a kapịrị ọnụ, tinye otu isiokwu ahụ, yabụ ị nwere ike ime ya na WhatsApp ma ugbu a, anyị na-akụziri gị otu esi eme ya na nnukwu asọmpi ya.
Anyị nwere ike iji ọchụchọ gị dị elu site na iji taabụ gịN'ime ihe ndị a ga-ahọrọ bụ Nkata, Media, Njikọ, Faịlị, Egwu na Olu. N'ọnọdụ niile, ọ na - aghọ ezigbo nzacha ma ọ bụrụ na ihe ị na - achọ bụ onyonyo, faịlụ ọdịyo, ozi olu, na ndị ọzọ.
1 Otu esi eji nyocha nke Telegram
2 Nnyocha ime dị ike
Telegram si elu search ugbu a na-agụnye ike nzacha nke ga - enyere gị aka ịchọta ozi ọsọ ọsọ, chọta ndị ịchọrọ. Taabụ ga-akawanye mma yana ya na njedebe, ị ga-ahụ ihe ịchọrọ ịchọta, ma ọ bụ icheta ya ma ọ bụ ịkekọrịta ya.
Iji jiri ọchụchọ na ụzọ dị elu mepee ngwa Telegram, chọta iko na-eme ka inwunye dị na taabụ dị na elu aka nri, pịa ya ma chere ka ọ buru. Ugbu a ị nwere ike itinye ederede ịchọrọ ịchọta, na Chats ọ ga-egosi gị ndị kachasị ọhụrụ, mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịkụ ihe ahụ, gakwuru onye akọwapụtara ma tinye isiokwu.
N'ọtụtụ oge, ọ bụrụ na ị na-achọ ederede, họrọ nke mbụ, nke abụọ bụ Media (Images), nke atọ bụ ịchọ njikọ njikọ, nke anọ bụ faịlụ (.doc, .pdf, .jpg na ndị ọzọ). N'ikpeazụ, na egwu, faịlụ ọdịyo ndị ahụ na-akọrọ na mkparịta ụka na olu ga-abụ audios zitere na kọntaktị na otu gị.
Nnyocha ime dị ike
O juru anyị anya mgbe anyị na-achọ ụdị ozi ọ bụla, ebe ọ bụ na ihe ọ na-achọ ọ chọtara n'oge niile, ọ na-eme ya ka ọ dị ka WhatsApp ma enwegogo ya n'ihi ọrụ nke ndị mmepe. Iji ya dị mfe na ịchọta ihe ga-adịrị gị mfe ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Otu esi eji nyocha nke Telegram
Ikwerre Eze dijo
Ndewo, enwere ike ịchọ ederede dị n'ime okwu? imaatu, choo "igwe" ma wetara m ozi ebe i dere "bat"? Agbalịrị m na. * Na mbido na na njedebe ma ọ naghị arụ ọrụ m, lol
Ezigbo Lucas, ọ na-achọkarị mkpụrụ okwu akọwapụtara, dịka ọmụmaatụ iji kọwaa nke ọ bụla ọ na-agba mbọ ka ọ bụrụ nke ziri ezi ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke ziri ezi, ihe gbasara eluigwe bụ eziokwu na ọ nọ n'etiti ụsụ na nyocha ahụ enweghị isi.
Emeela m ọtụtụ nyocha ọ na - akụ injin ahụ nke ọma.
Samsung Galaxy S21 imewe leaks